တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: June 2009
နေပါရစေတော့ … အမေ … ။
အမှားနဲ့အမှန်ဆိုတာ ဘယ်သူက သတ်မှတ်တာလဲ …
တယောက်နဲ့အများ ဘယ်သူက မှားသလဲ …
အများနဲ့တယောက် ဘယ်သူ့ကို ကြောက်ရမလဲ …
ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်လဲ မနှစ်သက်မိတော့ပါ အမေ … ။
ပွန်းရိနေပြီပေါ့ အမေ … ။
ကိုယ်ဟာ ဘာလဲ …
မှန်ထဲတောင် ရဲရဲမကြည့်ဝံ့တော့ပါ အမေ … ။
ပြန်လို့ရရင် ပြန်လိုက်ချင်ပါရဲ့ …
အမှန်နဲ့ အမှား မခွဲခြားနိုင်
ပန်းတိုင်တွေလဲ ပျောက်ဆုံးကာ …
အမေ့ကိုသာ အခါခါတမ်းတ …
အိမ်ပြန်ပါရစေ …. အမေ …. ။
၃၀၊ ဇွန်၊ ၂၀၀၉
Posted by မေဓာဝီ at 5:57 PM5comments
မှောင်လွှမ်း ထုရှည်၊ ချုပ်ညရီချမ်း၊ ရာသီနွမ်းမှာ၊ လူများစွာတို့၊ မှန်းကာမျှော်ဆ၊ ရမ်းရော်တ-သည့်၊ သာစွရောင်ရှိန်၊ နေသူရိန်မင်း၊ ထိန်ဝါလင်းလျက်၊ ဒေါင်းငှက်တွန်ကျူး၊ အိုးဝေမြူးမည့်၊ ထူးသည့်ချိန်ခါ၊ မင်္ဂလာရက်၊ ရောက်လာလတ်ဟု၊ ရွယ်မှတ်ပြုလေ၊ တောင်းဆုချွေသည်။ ... ။ နံနက်နေ လန်းဖြာသာစေကြောင်း။
ဆောင်မြန်းသူ့ဆီ၊ ရွယ်ကာရည်စူး၊ ပွင့်ဖူးတင့်ဆန်း၊ မွှေးပျံ့လန်းကြိုင်၊ ဤပန်းခိုင်ကို၊ လှမ်းပိုင်သီဆွတ်၊ စိတ်ဝယ်ညွတ်ကာ၊ လွတ်လပ်စေကြောင်း၊ ဆုမွန်တောင်း၍၊ အပေါင်းလက်ချီ၊ တူညီထက်သန်၊ မွန်မြတ်မှန်သည့်၊ ရည်ထန်စိတ်ဇွဲ၊ မယိုင်လဲအောင်၊ မေတ္တာဆောင်လျက်၊ အောင်ပန်းဆက်သည်။...။ အဖျက်တွေ လှမ်းကွာပါစေကြောင်း။
အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အာဇာနည်သွေး၊ မြန်ပြည်ရေးတွက်၊ စွန့်လျက်ဘ၀၊ နှစ်-လ-ရက်ပေါင်း၊ ရှည်ကြာညောင်းလည်း၊ အားခဲသည်းခံ၊ ဇွဲရင့်သန်ကာ၊ ၀င့်မာန်မလျှော့၊ ခေါင်းမော့ဦးတည်၊ ပန်းတိုင်ဆီသို့၊ ယုံကြည်ချက်လွှမ်း၊ ရောက်မည်မှန်းလျက်၊ ခြေလှမ်းဆက်သူ၊ လူထုသခင်၊ တို့မိခင်သည်။...။ အသက်ရှည် ကျန်းမာပါစေကြောင်း။
(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အသက် ၆၄-နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကို ရည်စူး၍ ရေးဖွဲ့ပါသည်။)
Posted by မေဓာဝီ at 9:03 AM3comments
Labels: ကဗျာ, ကိုယ်တိုင်ရေး ရတုများ, ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်, မွေးနေ့ဆုတောင်း
Posted by မေဓာဝီ at 1:18 PM4comments
Posted by မေဓာဝီ at 9:40 AM 8 comments